Shiinaha 30mm Midab Midabaynta Warshadaynta Qaboojiyaha Tattoo ee Xakamaynta | MOLONG
30mm Midab Gradient Qabsashada Tattoo Qabsashada
Miisaanka saafiga ah: 64.5g Miisaanka guud: 134.5g
Cabir: 80.5mm * 30mm
Xirxirida: sanduuqa gacanta + 3 uum bir bir ah oo bir ah oo bir ah (85-90-95mm)
Midab: midab midabkeedu yahay midab madow oo casaan ah oo buluug ah
1. Waxyaabaha: aluminium daawaha
2. Geedi socodka: CNC xardho saxnaanta isku dhafan
3. Cabirka pin pinka: Heerka Cheyenne
4. Qaab dhismeedka: Kubad bir ah oo la dhisay si loo hagaajiyo qaab dhismeedka irbadda
5. Midab: Wejiile laba-midab leh
1. Farsamaynta CNC la xardhay, dareenka gacanta jilicsan, darajo sare;
2.304 dhumucda birta adag, adkeysi leh iyo xoqidda u adkeysata, mashiinka qufulku ma ruxmi doono;
3. Muuqaalka moodada, midabka jilicsan iyo midabka hodanka ah;
4. Kubad bir bir ah oo meelaysan oo heer sare ah oo lagu dhejiyay birta jirka dhexdiisa, si sax ah u hagaaji booska cirbadda, dhawaquna waa dhagan yahay;
5. Naqshadaynta muuqaalka 'Ergonomic', dhididka oo aan siibiibixin, oo aan daalin ka dib isticmaalka muddada-dheer;
6. Ku habboon inta badan cirbadaha isku dhafan ee suuqa ku jira;
Soo celinta (haddii ay khuseyso)
Waxaan aqbalnaa soo celinta alaabada. Macaamiisha waxay xaq u leeyihiin inay ku dalbadaan soo celin 14 maalmood gudahood kadib helitaanka alaabta.
Si aad xaq ugu yeelatid soo noqoshada, sheygaagu waa inuu noqdaa mid aan la isticmaalin isla xaaladdiina aad ku heshay. Sidoo kale waa inuu ku jiraa baakadka asalka ah. Si loo dhameystiro soo celintaada, waxaan ubaahanahay rasiid ama cadeyn iibsi.
Macaamiisha waxaa lagu soo oogi doonaa oo keliya hal mar ugu badnaan kharashyada dhoofinta (tan waxaa ku jira soo celinta); Lacag dib u habeyn ah laguma soo dallacayo macaamiisha si loogu soo celiyo badeecad.
Marka soo-celintaada la helo oo la kormeero, wakiilkayaga iibka ayaa goor dhow kula soo xiriiri doona. Waxaan sidoo kale kugu wargalin doonnaa oggolaanshaha ama diidmada soo celintaada. Haddii laguu oggolaado, ka dib soo celintaada ayaa la maareyn doonaa. Waxay qaadan kartaa waqti ka hor inta aan lacagtaada si rasmi ah loo soo dirin. Badanaa waxaa jira waqti waxsoosaar ah kahor intaan lacagta lasoo celin. Fadlan la xiriir wakiilka iibka si aad u hesho faahfaahinta soo celinta.
Hore: HELLO II Lithium Battery Tattoo Pen
Xiga: Sixir 5CM Qabasho Daboolo Daboolka Laastikada Laastikada ah Oo La Daadin Karo Oo Lagu Qaadi Karo Faashadda
Qabashada Tattoo la hagaajin karo
Qabashada la tuuro
Qabashada Tattoo la tuuro
Qabashada Tattoo-ka birta ah
Faashadda Qabashada Tattoo
Daboolka Tattoo Grip
Qabashada Tattoo Iyo Cirbadaha
Qabashada Tattoo Iyo Talooyin
3D wajiga wajiga maqaarka 3D Microblading mak joogto ...
Xirmooyinka Tattoo Xirfad leh oo leh Mashiinnada gariiradda wanaagsan ...
Inkasta Tattoo Inkasta oo Mashiinka Mashiinka E ...